mercredi, 08 mars 2017 12:00
Sary Sobika Ivolohina
Tsy mitsahatra miakatra ny rano.
mercredi, 08 mars 2017 11:53
Befandriana Avaratra : Namono olona iray ny rivodoza Enawo
Lehilahy lehibe iray maty ary vehivavy iray folaka nianjeran'ny tranon'ny Ex-SINPA Distrika Befandriana Nord ny alin'ny talata 7 marsa.
mercredi, 08 mars 2017 11:34
Sary Sobika Soanierana Ivongo
Soanierana Ivongo: Novakiana ny vinany ampihena ny rano
Nisaotra an'ireo tovolahy matanjaka ny teto an-tanana tokony tamin'ny 10 ora alina namaky ny vinany fa raha tsy izany dia dibo-drano ny fokontany Ambinany alina. Maro ireo trano rava.
mercredi, 08 mars 2017 11:27
Antananarivo : Mikija ny orana entin'ny rivodoza Enawo
Voakasik'izany ny Faritra efatra, Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava ary Itasy mandrafitra ny Faritanin'Antananarivo.
mercredi, 08 mars 2017 11:23
Enawo : Ao Mandritsara
Ao amin'ny Kaominina Antsirabe Distrika Mandritsara no misy ny foibeny tamin'ny 6 ora maraina teo, ary manohy ny diany mianatsimo.
Alaotra : Mikija ny orana
Ahiana ny fiakaran'ny rano manoloana ny ora-mikija entin'ny rivodoza Enawo. Faly sahirana ny tantsaha izay ela niandrasana rano hambolem-bary, nefa izao be firotsaka izao indray ahiana hitondra atsanga hanototra tanimbary.
mercredi, 08 mars 2017 10:53
Maroantsetra : Ao anaty rano ny 90% ny tanàna
Ao anaty rano ny ilany atsinanan’ny Maroantsetra tampon-tanàna. Rava fananana ny mponina, maro ny biby fiompy lasan’ny rano, potika ny voly, traboina tanteraka ny Vahoakan’i Maroantsetra takaitra navelan’ny rivodoza Enawo.
mercredi, 08 mars 2017 10:50
Maroantsetra : Tsy misy jiro
Tapaka nanomboka ny alatsinainy 6 martsa tamin'ny 9 ora alina ny jiro teto Maroantsetra ary tsy mbola miverina amin'izao alarobia maraina izao. Sarotra ny fifandraisana, sy ny fahazoam-baovao mikasika ny fiantraikan'ny rivodoza Enawo, indrindra amin'ireo kaominina ambanivolo. Miantso ny handefasana haingana tranolay hipetrahan'ny traboina ny lehiben'ny Distrika satria saika feno avokoa ny toerana toy ny sekoly sy Fiangonana itobian'izy ireo.
mercredi, 08 mars 2017 10:48
Andapa - Sambava : Tapaka ny lalana
Feno ranontany (éboulement) ny lalana mampifandray an’Andapa amin’i Sambava, renivohitry ny Faritra SAVA vokatry ny oram-be nentin’ny rivodoza Enawo. Vao 8km miala an’Andapa dia efa tapaka ny lalana. Mihitsoka ny fiarabe mpitondra solika mamatsy ny Jirama Andapa. Maizina tanteraka ny tanàna araka izany.
mercredi, 08 mars 2017 10:43
Mampikony : Manomboka miakatra ny rano
Manomboka miakatra ny reniranon’i Bemarivo, lalovan’ny lalam-pirenena faha-6 noho ny rotsak’orana entin’ny rivodoza Enawo. Ny fiakaran’ny rano ao amin’ny Radier ao Ambohitoaka no ahian’ny maro raha mitohy ny orana.
Page 130 sur 279